Burundi oo hanjabaad kasoo saartay ciidankeeda ku sugan Soomaaliya iyo jahwareer arrinkaasi ka dhashay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Burundi oo hanjabaad kasoo saartay ciidankeeda ku sugan Soomaaliya iyo jahwareer arrinkaasi ka dhashay
Dowladda Burundi ayaa ku hanjabtay inay la bixi doonaan ciidankooda ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, hadii Midowga Afrika uu kusii adkeysto inaysan si toos ah u bixin mushaaraadka ciidamadooda, oo la sheegay in muddo 10 bilood ah aysan wax mushaaraad ah qaadan.
Wasiirka gaashaandhiga ee dalka Burundi Emmanuel Ntahomvukiye oo ka jawaabayay su’aalo ay weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka Burundi ayaa sheegay in ciidankooda qeybta ka ah howlgalka AMISOM aysan muddo 10 bilood ah wax gunno ah qaadanin, isagoona sidoo kale xusay in Midowga Yurub ay xanibeen lacagihii la siin jiray ciidanka Burundi ee ka howlgala gudaha Soomaaliya.
Waxa uu wasiirka sheegay in arrintaan ay tahay mid aan loo dulqaadan karin islamarkaana uusan jirin dal aqbalaya in ciidankiisa uu xuquuq la’aan ah ku shaqeeya, taasi bedelkeedana ay wanaagsan tahay ciidanka Burundi in dib loogu soo celiyo dalkooda.
Dhinaca kale, madaxa guddiga ammaanka iyo difaaca ee baarlamaanka dalka Burundi Victor Burikukiye ayaa sheegay in haatan la joogo xilligii ciidankooda laga soo saari lahaa gudaha Soomaaliya, wuxuuna xusay in ciidankaasi wax mushaar ah aan la siinin muddo 10-bilood ah.
Waxa uu Victor Burikukiye tilmaamay inay midowga Yurub ay ka biyo diideen in mushaaraadka ciidankaasi soo marsiiyaan dowladda Burundi, isagoona carrabka ku adkeeyey in la joogo xilliga ciidankaasi dib loogu soo celin lahaa dalkooda hooyo.
“Ma jirto dowlad ka tirsan caalamka oo ogolaanayo in mushaarka ciidankooda bixiyaan hay’ado kale, Burundi marna ma yeelayso arrintaas” Sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha guddiga ammaanka iyo difaaca ee baarlamaanka Burundi Victor Burikukiye.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah xildhibaanadda baarlamaanka Burundi ayaa ka digay in la qaato go’aan deg-deg ah, waxayna ku baaqeen in wada-xaajood lala galo dhamaan dalalka xubnaha ka ah howlgalka AMISOM iyo xitaa ururka Midowga Yurub, si loo xaliyo xiisadda haatan taagan.
Si kastaba ha ahaatee, lama oga jawaabta ay Midowga Yurub ka bixin doonaan hadalkaan kasoo yeeray dowladda Burundi, iyadoona sida la ogsoon yahay ciidanka Burundi ay ka mid yihiin ciidamada ugu badan ee AMISOM oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.